Hurumende Inorambidza Kubviswa Mudzimba Vanenge Vatadza Kubhadjhara Rendi Munguva yeLockdown
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vakazivisa kuti dare remakurukota ehurumende, kana kuti ‘Cabinet”, rakabvumirana kumbomisa vanhu kubudiswa mudzimba dzavanogara kana kubviswa muzvimbo dzemabhizimisi mavanorenta kana vachinge vatanga kubvisa mari dzerendi.
Vachinyora pa Twitter pavo, VaMangwana vakati izvi zvinotanga pamari dzinobhadharwa neavo vanoshandisa dzimba kana nzvimbo dzavanobhadhara marendi kuti vagare kana kushandira, vachiti mari dzemarendi dzinofanirwa kumbomira kubhadharwa pari zvino uye hapana anofanirwa kubudiswa munzvimbo dzavanogara nenyaya yekusabhadhara mari dzema rendi dzange dzichifanirwa kubhadharwa kupera kwemwedzi uno, Kubvumbi, kusvika panomiswa mutemo wekuti vanhu vagare mudzimba dzavo, kana kuti ‘lockdown’.
Mudzidzisa wezvehupfumi hwenyika paNational University of Science and Technology, VaStevenson Dlamini, vaudza Studio7 kuti danho rakatorwa nehurumende richabatsira vanhu vazhinji vanozvishandira sezvo vari ivo vakawanda kupfuura vanoshandira makambani.
VaDlamini vanoti zvicharwadza vazhinji asi zvakanakira avo vanoshanda vega sezvo vari ivo vazhinji vanoshanda munyika uye vanopfuura avo vanoshandira makambani.
Hurukuro naVaStevenson Dlamini